Xafiiska Intii lagu gudajiray wada hadalka, naqshadeeyayaasha ayaa u fasaxay qaabeynta kaliya ma aha qeybinta qeybaha gudaha laakiin isku xirka magaalada / meel dadka iyo wada jirka ah, si jawiga hoose iyo dhulku uusan iskhilaafsaneyn magaalada, maalintiina waa wajiga qarsoon ee waddada, habeenkii. Ka dib waxay noqoneysaa khaanad quraarad galaas ah oo ku taal magaalada.
Naqshada Baakadaha Waxaa waxyoonay caano, oo ah waxyaabaha ugu muhiimsan. Naqshadeynta weelka qaaska ah ee nooca xirmooyinka caanaha ayaa ka tarjumaya astaamaha badeecada waxaana loogu talagalay inay bartaan xitaa macaamiisha markii ugu horeysay. Intaa waxaa sii dheer, walxaha laga sameeyay polyetylen (PE) iyo caag (EVA) iyo astaamaha jilicsan ee midabka pastel ayaa loo isticmaalaa in lagu muujiyo inay tahay shey jilicsan carruurta leh maqaarka daciifka ah. Qaabka wareega waxaa lagu dabaqayaa geeska badbaadada hooyada iyo ilmaha.
Hoolka Cuntada Bandhig ku saabsan doorka qaab dhismeedka ee habka bogsashada, Elizabeth's Tree House waa garoon cusub oo laga cunteeyo oo loogu talagalay xerada daaweynta ee ku taal Kildare. U adeegidda carruurta ka soo kabashada cudurrada halista ah waxay bannaan tahay meel alwaax ah oo ku taal meel doog geed ah. Nidaamka jawaayadaha firfircoon ee firfircoon ee wali shaqeynaya ayaa waxaa ka mid ah saqaf muuqda, glazing ballaaran, iyo isku-dhafan midab leh, abuurista meel lagu cunteeyo oo gudaha ah oo wada-hadal la yeerta harada iyo nawaaxigeeda. Xiriirka qotada dheer ee dabiiciga ah ee heerarka oo dhan wuxuu kobciyaa raaxada isticmaale, nasashada, bogsashada, iyo sixirbararka.
Goobo Badan Oo Ganacsi
Goobo Badan Oo Ganacsi Magaca mashruuca La Moitie wuxuu asal ahaan kasoo jeedaa tarjumaadda Faransiiska ee badh, naqshaduna waxay si sax ah uga tarjumaysaa tan isu-dheellitirka lagu dhuftay walxaha ka soo horjeedda: labajibbaaran iyo goobada, iftiinka iyo mugdiga. Marka la fiiriyo meelaha xaddidan, kooxdu waxay doonaysay inay abuurto xidhiidh iyo qayb u dhexeeya labada tafaariiqda ee kala duwan iyada oo la adeegsanayo laba midab oo iska soo horjeedda. In kasta oo xudduudda u dhexeysa meelaha bannaan ee guduudka iyo madow ay caddaan tahay haddana sido kale waxay u aragtay aragtiyo kaladuwan. Jaranjarada wareegsan, badh casaan ah iyo nus madow, ayaa la dhigay bartamaha bakhaarka waxna bixiyaan.
Ololaha Xayeysiinta Feira do Alvarinho waa xaflad khamri oo sanadle ah oo ka dhacda Moncao, Portugal. Si loola xiriiro dhacdada, waxaa loo sameeyay boqortooyo qadiim ah oo khiyaali ah. Magac u gaar ah iyo ilbaxnimo, Boqortooyada Alvarinho, oo loo qoondeeyay sidaa darteed Moncao waxaa loo yaqaanaa gogolkii khamriga Alvarinho, waxaa la dhiiri geliyey taariikhda dhabta ah, meelaha, halyeeyada halyeeyada iyo halyeeyadii Moncao. Caqabadda ugu weyn ee mashruucan waxay ahayd in sheekada dhabta ah ee dhulka loo qaado naqshadda astaamaha.
Dhar Daabacan Ubax-cadowgu waa u dabaaldegga awoodda sawirka ubaxa. Ubax waa maado caan ah oo loo qoro shaqsi ahaan suugaanta Shiinaha. Marka la barbardhigo ubaxaynta ubaxa caanka ah, sawirrada ubaxa qurmay ayaa inta badan lala xiriiriyaa jinx iyo taboos. Ururintu waxay eegaysaa waxa qaabeeya aragtida bulshada ee ku aaddan waxa uugu sarreeya iyo dulucda. Waxaa lagu naqshadeeyay 100cm illaa 200cm dhererkeeda dharka tulle, daabacaadda silkscreen-ka ee dharka wax laga beddelo, farsamada dharka ayaa u oggolaaneysa daabacaadaha inay sii ahaadaan kuwa jilicsan oo ku fidsan mesh, abuurista muuqaalka daabacaadaha hawada sare.
Xafiiska Naqshada Baakadaha Hoolka Cuntada Goobo Badan Oo Ganacsi Ololaha Xayeysiinta Dhar Daabacan